ဂန္ထ၀င် အစ္စလာမ့်ယဉ်ကျေးမှုများရှိ အမျိုးသမီးတို့၏စွမ်းဆောင်ချက် (၄) - News @ M-Media
ဂန္ထ၀င် အစ္စလာမ့်ယဉ်ကျေးမှုများရှိ အမျိုးသမီးတို့၏စွမ်းဆောင်ချက် (၄)
– တမန်တော် မုဟမ္မဒ်(ငြိမ်းချမ်းသာယာမှု ခညောင်းပါစေ)၏လက်ထက်နှင့် သမိုင်းကာလတစ်လျှောက် မွတ်စ်လင်မ်အမျိုးသမီးတို့မှ သက်ဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာအရည်အသွေး မြှင့်တင်စွမ်းဆောင်ခြင်း၌ ထင်ရှားသည့် ဥပမာအထောက်အထားများ ရှိနေကြသည်။ သူတို့သည် စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပညာရေး၊ ဘာသာရေးဥပဒေပြုလုပ်ငန်း၊ ဆေးဝါးနှင့် ကျန်းမာရေးတို့တွင် လူထုကောင်းကျိုးသက်သက်အလို့ငှာ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြ၏။ ရှရီအဟ်(အစ္စလာမ့်ဥပဒေ)က မွတ်စ်လင်မ်တို့ကို လူ့အဖွဲ့အစည်းဝင်များ၏ ဘ၀ရေးရာအပေါင်းတို့အပေါ် အလေးထားရန် အားပေးတိုက်တွန်းထားသည်။ သို့ဖြစ်၍ အစ္စလာမ့်သမိုင်းတစ်လျှောက် သိပ္ပံဆိုင်ရာဗဟုသုတရှာဖွေခြင်းကိုလည်း ခ၀ပ်ခြင်းလုပ်ရပ်တစ်မျိုးအဖြစ် ယူဆသတ်မှတ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ အစ္စလာမ်သာသနာ ပေါ်ထွန်းခြင်းနှင့်တစ်ကွ သမားတော်ကဏ္ဍ၌လည်းကောင်း၊ စစ်မြေပြင်တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများအား ကုသရေး၌လည်းကောင်း အမျိုးသမီးတို့က ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လေ့ရှိခဲ့ကြ၏။ သို့သော် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့အကြား တင်းကြပ်သည့် စည်းကမ်းအချို့ရှိနေရာ
မိသားစုဝင်နှင့် မိသားစုဝင်ဖြစ်လာဖွယ်ရှိသူများမှအပ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုမှာ မရှိသလောက်သာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မွတ်စ်လင်မ်အမျိုးသမီးတို့က အဓိကအားဖြင့် အမျိုးသမီးများကိုသာ အဓိကထားပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ပေးခဲ့ကြသည်။ အထူးသဖြင့် လူမှုရေးရှုထောင့်အရ အမျိုးသမီးများ၏ကျန်းမာရေးကိစ္စများတွင် အမျိုးသားတို့ ပါဝင်ရန် မသင့်လျော်ကြောင်း သတ်မှတ်ခဲ့၏။ ဆေးဝါးကဏ္ဍတိုးတက်ရေးတွင် မွတ်စ်လင်မ်အမျိုးသမီးတို့၏ စွမ်းဆောင်မှု ဥပမာအချို့ကို ဖော်ပြပါမည်။
အစ္စလာမ်၏ ပထမဆုံးသူနာပြုအဖြစ် ဂုဏ်ပြုညွှန်းဆိုခံရသူမှာ ရုဖိုင်ဒဟ် ဘင့်န်သိ စအဒ် အလ် အစလာမီယဟ် ဖြစ်၏။ အစ္စလာမ့်ခေတ်ဦးပိုင်းရှိ ဆေးဝါးကုသပေးသူများနှင့် သူနာပြုများအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ခံရသည့် အခြားအမျိုးသမီးတို့မှာ – အေဒီ ၆၂၅ ခုနှစ် အုဟုဒ်စစ်ပွဲ၌ သူနာပြုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့သူ နုစိုင်ဘဟ် ဘင့်န်သိကအဘ် အလ်မဇီနီယဟ်၊ အွမ္မု အင်မရဟ် ဟု လူသိများသော အွမ္မု စိနန်း အလ်အစ္စလာမ် (သူမသည် မွတ်စ်လင်မ်ဖြစ်လာပြီးနောက် စစ်သည်များနှင့်အတူလိုက်၍ ရေတိုက်ကျွေးရန်နှင့် ဒဏ်ရာများကုသပေးရန်
တမန်တော်မြတ်ထံ ခွင့်ပန်လျှောက်ထားခဲ့သူဖြစ်သည်)၊ ခိုင်ဘရ်အရေးပြီးသည့်နောက် စစ်တပ်သူနာပြုအဖြစ် စေတနာ့ဝန်ထမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့သူ အွမ္မု မသာဝီ အလ်အစလာမီယဟ်၊ ဘဒရ်စစ်ပွဲတွင် စစ်သည်များကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သော အွမ္မု ၀ရကဟ် ဘင့်န်သိ ဟာရိဆ် (သူမသည် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် စုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်းတွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်)တို့ ဖြစ်ကြ၏။
(ပုံ -၅) အစ္စတန်ဘူလ်ရှိ တော့ပ်ကာပီနန်းတော်တွင် တွေ့ရသော စုလိုင်မာန်ဘုရင်၏ကြင်ရာတော် Hürrem Sultan or Roxelana (c. 1510 – April 18, 1558)၏ (ရေးဆွဲသူမသိ) ပုံတူပန်းချီကား။ သူမသည် မက္ကာမြို့မှဂျရုဆလင်နှင့် အစ္စတန်ဘူလ်မြို့အထိ အများပြည်သူနားနေဆောင်လုပ်ငန်းများ၌ အဓိကပါဝင်ခြင်းနှင့် ပရဟိတအလှူအတန်းပြုခြင်းများအတွက် ကျော်ကြားထင်ရှားသူဖြစ်၏။
၅(က)။ ရုဖိုင်ဒဟ် အလ်အစလာမီယဟ်
ရုဖိုင်ဒဟ် အလ်အစလာမီယဟ် ဟု လူသိများသော ရုဖိုင်ဒဟ် ဘင့်န်သိ စအဒ်ကို အစ္စလာမ့်သမိုင်းမှ တမန်တော်ခေတ်၏ ပထမဆုံး သူနာပြုအဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။ အေဒီ ၆၂၄ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃ ရက်တွင် ဖြစ်ပွားသော ဘဒရ်စစ်ပွဲ၌ သူမသည် တမန်တော် မုဟမ္မဒ်(ငြိမ်းချမ်းသာယာမှု ခညောင်းပါစေ)နှင့်အတူ စစ်ပွဲတွင်း ဒဏ်ရာရသူများ၊ အသက်ဘေးစိုးရိမ်ရသူများအပေါ် သူနာပြုလုပ်ရပ်ဖြင့် ပါဝင်ခဲ့သည်။
သူမသည် ဖခင်ဖြစ်သူ သမားတော် စအဒ် အစလာမီ အား ကူညီလုပ်ကိုင်ရင်း ဆေးဝါးဆိုင်ရာဗဟုသုတ အများအပြားကို သိနားလည်ခဲ့၏။ လူနာစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် သူနာပြုလုပ်ငန်း၌ ဘ၀ကိုနှစ်မြုပ်ထားခဲ့ပြီး နောင်သော် ကုသရေးကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်လာသည်။ သူမ၏အတတ်ပညာကျွမ်းကျင်မှုများကို ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းကဏ္ဍများတွင် အသုံးချဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ စစ်ပွဲများစွာ၏အချိန်ကာလအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့်ထိခိုက်မှုမှန်သမျှကို ဆေးဝါးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်နှံ့စပ်သူ သူမ ရှိရာ ရွက်တဲထံသို့ သွားရောက်ရန် တမန်တော်မြတ်က စေခိုင်းတော်မူလေ့ရှိခဲ့သည်။
ရုဖိုင်ဒဟ်ကို ကြင်နာစာနာတတ်သော သူနာပြုအဖြစ်လည်းကောင်း၊ စည်းရုံးရေးမှူးကောင်းတစ်ဦးအဖြစ်လည်းကောင်း ဖော်ပြထားကြသည်။ သူမသည် မိမိ၏ကျွမ်းကျင်မှုများဖြင့် အခြားအမျိုးသမီးတို့ကိုလည်း သူနာပြုများဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးပြီး ကျန်းမားရေးစောင့်ရှောက်မှုနယ်ပယ်၌ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်စေခဲ့သည်။ ၎င်းအပြင် သူမသည် ရောဂါဝေဒနာနှင့်ဒွန်တွဲနေတတ်သည့် လူမှုရေးပြဿနာများကို ကူညီဖြေရှင်းပေးရသော လူမှုဝန်ထမ်းတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ သို့သာမက အခက်အခဲရှိသောကလေးငယ်များအား ကူညီပေးပြီး မိဘမဲ့ကလေးငယ်များ၊ သူဆင်းရဲများ၊ အားနည်းနိမ့်ကျသူများကိုလည်း ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ပေသည်။
(ကြည့် – R. Jan, “Rufaida Al-Asalmiy, The first Muslim nurse”, Image: The Journal of Nursing Scholarship, 1996 28(3), 267-268; G. Hussein Rassool, “The Crescent and Islam: Healing, Nursing and the Spiritual Dimension. Some Considerations towards an Understanding of the Islamic Perspectives on Caring”, Journal of Advanced Nursing, 2000, 32 (6), 1476-84; Omar Hasan Kasule, “Rufaidah bint Sa’ad: Historical Roots of the Nursing Profession in Islam; History of Nursing in Islam (compiled by Sarah Miller); Rufaidah bint Sa’ad Founder of the Nursing Profession in Islam.)
၅(ခ)။ အလ်ရှိဖာ ဘင့်န်သိ အဗ်ဒုလ္လာဟ်
သာဝိကမကြီး အလ်ရှိဖာ ဘင့်န်သိ အဗ်ဒုလ္လာဟ် အလ်ကုရိုင်းရှီယဟ် အလ်အဒါဝီယဟ်သည် ရှေးဦးမွတ်စ်လင်မ်သမိုင်းတွင် ထိုခေတ်၏ အမျိုးသမီးပညာရှိတစ်ဦးအဖြစ် အခိုင်အမာ နေရာယူခဲ့၏။ စာပေယဉ်ကျေးမှုကင်းမဲ့သည့်ကာလတွင် စာတတ်ပေတတ်ဖြစ်နေခဲ့သည်။ လူထုရေးရာစီမံရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူလည်း ဖြစ်သည်။ သူမ၏အမည်ရင်းသည် လိုင်လာ ဖြစ်သော်လည်း သူနာပြုနှင့် ဆေးဝါးကုသမှုကို အစွဲပြုကာ ဝေဒနာကင်းပျောက်စေခြင်း အဓိပ္ပာယ်ရသည့် အလ်ရှိဖာ ဟု ဂုဏ်ပေးခေါ်ဆိုခံရသည်။ သူမသည် အင်းဆက်ပိုးမွှားများအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်သည့် ကုထုံးတစ်ရပ်ကို အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး၊ တမန်တော်မြတ်က သူမ နည်းလမ်းကို နှစ်သက်လက်ခံတော်မူသည့်အပြင် အခြားမွတ်စ်လင်မ်အမျိုးသမီးများအား သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးရန် တောင်းဆိုတော်မူခဲ့၏။
(ကြည့် – The articles Muslim Women in History and Al-Shifaa bint Abdullah al Qurashiyah al Adawiyah.)
၅(၃)။ နုစိုင်ဘဟ် ဘင့်န်သိ ဟာရိဆ် အလ်အန်ဆွာရီ
အွမ္မု အာသီယဟ် ဟုလည်းခေါ်ဆိုသော နုစိုင်ဘဟ် ဘင့်န်သိ ဟာရိဆ် အလ်အန်ဆွာရီသည် စစ်ပွဲတွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများအား ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ အစာရေစာတိုက်ကျွေးခြင်း၊ ရှေးဦးသူနာပြုအလုပ်တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၎င်းအပြင် ကလေးငယ်များအား အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာပြုပေးသူလည်းဖြစ်သည်။ (ကြည့် – Abdel-Hamid ‘Abd Rahman Al-Sahibani, Suwar min Siyar al-Sahābiyāt, Riyadh: Dar Ibn Khazima, 1414 H, p. 211; ‘Umar Kahala, A’lam al-nisa’, Damascus, 1959, vol. 5, p. 171.)
(ပုံ -၆) ၁၂၅၁ နှင့် ၁၂၈၂ ခုနှစ်အကြား Alphonso X, King of Leon and Castile မှ ရေးသားပြုစုစေခဲ့သည့် Alphonso X’s Book of Games (Libro de los Juegos) စာအုပ်ထဲတွင် တွေ့ရသော အန်ဒလူစီယာမှ စစ်တုရင်ကစားနေသူ အာရဗ်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးနှင့် ဗျတ်စောင်းတီးခတ်နေသူ မိန်းမပျိုတစ်ဦး။
၅(၄)။ ၁၅ ရာစု တူရကီမှ အမျိုးသမီးခွဲစိပ်ဆရာဝန်များ
မော်ရိုကိုနိုင်ငံ ဆာလေးမြို့ရှိ ရှေးဟောင်း ဆေးရုံတစ်ရုံ၏ ၀င်ပေါက်။ အဆိုပါ ဆေးရုံကို မွတ်စလင် ဗသုကာပညာရှင်များက ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး မွတ်စလင်သမားတော်များက စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။
ရှေးဦးအစ္စလာမ့်သမိုင်းအတွင်း ဆေးဝါးနှင့် သူနာပြုလုပ်များ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော အခြားအမျိုးသမီးများရှိခဲ့ကြရာအနည်းငယ်မျှသာ မှတ်တမ်းတင်ခံရသည်။ သို့သော် ဆေးဝါးနှင့် စာပေအနုပညာဆိုင်ရာ သမိုင်းကျမ်းဂန်များ၌ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း တူးဆွလေ့လာမည်ဆိုလျှင် အမည်များသက်သက်သာမက သူတို့၏ဘ၀နှင့် အောင်မြင်ထွန်းပေါက်မှုများကိုပါ မုချ တွေ့ရှိနိုင်ပေမည်။
၁၅ ရာစုနှစ်တွင် နာမည်ကြီး ခွဲစိပ်ကုသရေးလက်စွဲကျမ်း Cerrahiyyetu’l-Haniyye အား ပြုစုရေးသားခဲ့သော တူရကီ ခွဲစိပ်ဆရာဝန် Serefeddin Sabuncuoglu (1385-1468)သည် သားဖွားနှင့်မီးယပ်ကုထုံးနည်းစဉ်များကို ပုံနှင့်တစ်ကွ အသေးစိတ် ဖော်ကျူးခဲ့သည်။ အနောက်တိုင်းရှိ သူ၏အမျိုးသားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက အမျိုးသမီးကုသရေးသမားတို့အား ဆန့်ကျင်သည့်တိုင် သူသည် အမျိုးသမီးခွဲစိပ်ဆရာဝန်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပေသည်။
အနာတိုလီယာရှိ အမျိုးသမီးခွဲစိပ်ဆရာဝန်များသည် အများအားဖြင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ခန္ဓာအတွင်းအပြင်ဆိုင်ရာ အထွေထွေသဘာဝရောဂါဝေဒနာတို့ကို ကုသဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြသည်။ Cerrahiyyetu’l-Haniyye ကျမ်းတွင် အမျိုးသမီးခွဲစိပ်ဆရာဝန်များအား ပုံကြမ်းငယ်လေးများဖြင့် သရုပ်ဖော်ခြယ်မှုန်းထားသည်ကို ထူးခြားစွာတွ့ရှိရ၏။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးခွဲစိပ်ဆရာဝန်များကို ၁၅ ရာစုနှစ်အစောပိုင်းတည်းက သားဖွား၊ မီးယပ်ရောဂါနှင့်ကလေးဆေးပညာကဏ္ဍများအတွက် အသိအမှတ်ပြုလက်ခံထားကြောင်း နားလည်နိုင်ပေသည်။
ဆေးပညာသမိုင်းကြောင်းတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်နေမှုနှင့်ပတ်သက်၍ တွေ့ရခြင်းမှာ ထိုခေတ်ကာလ လူ့အဖွဲ့အစည်းက အမျိုးသမီးတို့၏စွမ်းဆောင်မှုတို့ကို လက်ခံအားပေးခြင်းဟူသော ယေဘူယျအမြင်အား ဖော်ပြနေပါသည်။ Serefeddin Sabuncuoglu ၏ ကုထုံးကျမ်း၌ ရှုပ်ထွေးခက်ခဲသော ခွဲစိပ်ကုသရေးနယ်ပယ်ထဲအမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ချက်များ အပါအ၀င် အမျိုးသမီးများအပေါ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အားပေးသည့် ရှုထောင့်ကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် တွေ့ကြရပါမည်။
(ကြည့် – G. Bademci Gulsah, “First illustrations of female “Neurosurgeons” in the fifteenth century by Serefeddin Sabuncuoglu, Neurocirugía (Sociedad Española de Neurocirugía, Murcia, Spain), April 2006, vol. 17, no. 2, pp. 162-165. The book was edited several times, see Serefeddin Sabuncuoglu, Kitabul Cerrahiyei Ilhaniye, Istanbul, Kenan Basimevi, 1992, and Ankara, Turk Tarih Kurumu Yayinlari, 1992.)